Private ugboelu njem bụ ihe pụrụ iche. Ọ bụ nanị. Ị na-enwe ntụsara na eji enyere ndụ aka nke ihe dum ụgbọelu, bụrụ onwe gị. Ihe dum akwọ ụgbọ bụ na-eje njikere izute gị niile choro ya n'oge ọ na njem gị.
Ọ dịghị ihe na-eji tụnyere ndị luxuries na ntụsara nke a n'etiti afọ size onwe ugboelu ichata ọrụ. Ọbụna nghọta nke ndị kasị oké ọnụ ụgbọ mmiri ndị dị n'ụwa a abụghị nso ihe ị ga-ahụ ozugbo ị ịbanye na ụfọdụ onwe jets. Ị nwere ike ịchọta a ugboelu n'ime ime ka zuru ezu na ọ bụla otu item okomoko si ọhụrụ music Player telivishọn i mgbe hụrụ tupu. The okomoko ngwongwo ị na-ahụ n'ime ụdị ụgbọelu na-adịghị ahụ ndị i nwere ike mfe ịzụta. Ha bụ ole na releases nke kasị mma okomoko ụdị.
Private ugboelu na-ewe okomoko na-esonụ larịị. Ọ na-enye a ọhụrụ pụtara na ọsọ na arụmọrụ. Na a n'etiti afọ size onwe ugboelu ichata ọrụ, ị ga-eru gị ebe ngwa ngwa. Ndị a jets ife ọsọsọ karịa ọtụtụ azụmahịa ụgbọ elu. Ụfọdụ ụgbọ na a top ọsọ nke 982 km / h. Ikpokọta a na nke bu eziokwu na onwe ugboelu njem na-azọpụta gị si ogologo nche ndenye ego na bureaucracies nke isi ọdụ ụgbọelu na ị ga-n'elu arụmọrụ na mma.
Private ugboelu eji enyere ndụ aka na-pụọ n'ụwa. Ị pụrụ ịnụ ụtọ a na-ekpo ọkụ ịsa ahụ tupu ọdịda. Nke a ga-enyere mitigate arahụghị ụra. N'oge njem gị, ị ga-esi kacha mma nke esi nri, ntụrụndụ, na arụpụtaghị ngwaọrụ.
I nwere ezi ihe mere ha na-eji a n'etiti afọ size onwe ugboelu ozi, kama iji a azụmahịa ụgbọelu. Warren nri nkuru n'onwe, onye nwe Berkshire Hathaway kwuru na onwe ugboelu ọrụ nyeere ya aka ime ihe ndị ọ na-enweghị ike mere ọ bụrụ na ọ na-eji a azụmahịa ụgbọelu. super size onwe ugboelu ọrụ ga-ewe gị azụmahịa na-esonụ larịị.
Super Mid-size Jet Ụdị